Qalabka Warshadaha ee Shiinaha wuxuu dejiyaa warshad iyo soo -saareyaal | SJJ
Wali miyaad raadinaysaa Agabyada Gaarka ah ee Gaarka ah oo saldhig u ah macaan carruurta? Waxaa laga yaabaa inaad fiiriso qalabkayaga waraaqaha ee quruxda badan. 6pcs qalabka wax lagu qoro ee ku jira kiish qaadis caag ah oo leh soo jiidasho, fududahay in la qaado, hadiyad ku habboon dugsiga, guriga, xafladda ama munaasabado kale
Wali miyaad raadinaysaa Khaas Qalab Qalabs kee saldhig u ah macaanka carruurta? Waxaa laga yaabaa inaad fiiriso qalabkayaga waraaqaha ee quruxda badan. 6pcs qalabka wax lagu qoro ee ku jira kiish qaadis caag ah oo leh soo jiidasho, fududahay in la qaado, hadiyad ku habboon dugsiga, guriga, xafladda ama munaasabado kale.
Waxaan bixinnaa agabyo dugsiyeedyo gaar loo leeyahay oo kala duwan, xafiisyada xafiisyada, qalabka xafiisyada carruurta ama sahayda dugsiga. Waxaa naga go'an inaan soo saarno alaabo cusub oo hal abuur leh oo loogu talagalay carruurta. Hal -abuurka, tayada sare iyo badbaadada ayaa ah ujeedooyinkeena.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan xirmooyinka joogtada ah ee la habeeyay ee summadaada leh, xulashooyinka daabacaadda habboon, kaalmada farshaxanka, qiimaha ugu fiican ama hadiyado kale oo xayeysiin ah oo carruurta loogu talagalay, xor u noqo inaad noo soo dirto farriin.
Waxaa ku jira 2 qalin, 1 taliye, 1 tirtir, 1 afayste, 1 kiiska PVC oo soo jiidasho leh
Naqshado furan oo lacag la'aan ah caaryada & Lacag dejinta Daabacaadda.
Si sahlan loo qaadi karo, hadiyad ku habboon dugsiga, guriga, xafladda ama munaasabadaha kale
Loo habeeyay sida codsigaaga, oo leh cabbirro iyo midabbo kala duwan
Xiga: Silikoon Silsilad iyo Gacan -gacmeed
Kiisaska Qalinka Weyn
Kiisaska Qalinka Qabow
Qalin Qurux Badan
Kiisaska Qalinka Iskuulka
Kiis Qalin jilicsan
Biraha Qalinka Birta